तपाईँको यो साता कस्तो रहनेछ? हेर्नुहोस् साप्ता’हिक राशिफ’ल(मा’घ १८ गते आइतबारदे’खि २४ ग’ते शनिबारसम्म) – Sadhaiko Khabar
तपाईँको यो साता कस्तो रहनेछ? हेर्नुहोस् साप्ता’हिक राशिफ’ल(मा’घ १८ गते आइतबारदे’खि २४ ग’ते शनिबारसम्म)
प्रकाशित मिति: आइतबार, माघ १८, २०७७ समय: १३:३७:३६
२०७७ माघ १८ गते आइतबारदेखी माघ २४ गते शनिबारसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
कन्या राशि (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) साताको प्रारम्भमा बौधिक ब्यत्तित्वहरुको साथ सहयोग प्राप्त रहनेछ । अध्यन अध्यापनमा समय उत्तमरहेकोछ । आय आर्जनका निम्ती समय राम्रो रहेकोछ । आम्दानिका बिभीन्न श्रोतहरु फेला पर्नेछन । पारीवरिक शुःख प्राप्त हुनेछ । निर्णय गर्ने क्षमतामा बृद्धि हुनेछ । मनोरञ्जनका श्रोत्र र साधनका श्रेत्रमा सामान्य खर्च बढ्न सक्नेछ । कार्यसम्पादनमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुन सक्नाले समय निरासा पुर्ण ब्यतित रहनेछ । स्वास्थमा सामान्य समस्या देखा पर्नेछन । साताको अन्त्यमा हरकोहीको बिश्वासमा नपर्नु उत्तम रहनेछ । परोपकार को क्षेत्रमा मन जानेछ । नजिकका मित्र बाट धोका हुन सक्छ । आफुभन्दा सानाको साथ सहयोगमा गरीएका कार्य सहजता पुर्ण सम्पादन हुनेछन । अध्यनअध्यापनमा समय उत्तम रहनेछ । नयाँकार्य थालनिको अवसर समेत प्राप्त हुनेछ ।आर्थिक क्षेत्र सबल रहनेछ ।